Ngaba i-India izakubangela ukuba i-Vistara ye-airline ibese-Tokyo? | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » Ngaba i-India izakubangela ukuba i-Vistara ye-airline ibese-Tokyo?
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zeAnga • Iindaba zokuhamba zaseIndiya • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Amathuba otyalo-mali • Iindaba zaseJapan zokuhamba • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo
Ngaba i-India izakubangela ukuba i-Vistara ye-airline ibese-Tokyo?
Nangona kunokuba nesithokothoko ngokubanzi kubuchwephesha beenqwelomoya kunye nokhenketho, imitha yethemba iyeza ngokufuthi, eyamkelekileyo kuhambo lwaseIndiya naseJapan.
Inqwelo moya yakwaVistara izakwazisa ngeenqwelo moya phakathi kweDelhi neTokyo ukuqala nge-16 kaJuni kulo nyaka.
Inkonzo yakanye ngeveki izakusebenza kwisikhululo seenqwelomoya iHaneda eTokyo ibhabhela eNew Delhi.
I-glitch enokwenzeka, nangona kunjalo, kukuba inani lamatyala amatsha e-COVID-19 e-coronavirus e-India ayaqhubeka nokwaphula iirekhodi.
Olunye lolo phuhliso kukuba inqwelomoya iVistara, indibaniselwano yeTaj Group kunye neSingapore Airlines (iTata SIA Airlines Limited), imiselwe ukuqala iinkonzo zomoya ukusukela nge-16 kaJuni phakathi kweDelhi neTokyo.
IVistara yindiza yenqwelo moya yaseIndiya egcweleyo eseGurgaon kunye nehabhu yayo I-Indira Gandhi kwiSikhululo senqwelomoya. Umphathi, intsebenziswano phakathi kweTata Sons kunye ne-Singapore Airlines, iqale ukusebenza ngoJanuwari 9, 2015 ngenqwelomoya yayo yokuqala phakathi kweDelhi neMumbai. Igama layo lathatyathwa kwigama lesiSanskrit elithi vistara elithetha “isibhakabhaka esingenamda.”
Inkonzo yakanye ngeveki izakusebenza kwisikhululo seenqwelomoya iHaneda eTokyo ibhabha iye eNew Delhi ngokuthe ngqo phantsi kwesivumelwano sebhotile yokuhamba eIndiya neJapan.
Indiya neJapan Ndisoloko ndineshishini elisempilweni kunye nokugcwala kwabakhenkethi, kwaye inkonzo entsha iyakwamkelwa nanjengoko iinkonzo eziqhelekileyo zinokuthatha ixesha ukusuka.